R/wasaare Khayre oo la kulmay Madaxweyne Erdogan – XAMAR POST
Ra’iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku sugan magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa la kulmay Madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan.
Madaxweyne Erdogan iyo Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal iyo dowrka Dowladda Turkigu ay ka qaadanayso la dagaalanka Ururka Al-Shabaab.
“Soomaaliya iyo Turki waa labo wadan oo walaalo ah, waxayna diyaar u yihiin in ay is taageeraan iskana kaashadaan wada shaqeynta labada dawladood, si la iskugu xiro quluubta labada shacab” Ayuu yiri Khayre.
Madaxweyne Erdogan ayaa tacsi u diray dadkii ku geeryooday qaraxii 14 October ka dhacay Muqdisho, Sidoo kalena waxuu u duceeyay shacabkii ku dhawaacmay Qaraxaas, isagoona balan qaaday in ay mar walba la qayb sanayaan dhibaatooyinka ay la kulmaan shacabka Soomaaliyeed.
Dhanka kale Khayre ayaa waxa uu booqday dhaawacyadii la geeyey isbitaalada dalkaasi, isaga oo halkaasi kula soo kulmay qaar ka tirsan dhaawacyada iyo Eheladii la socday, wuxuuna ka wareystay halka ay wax marayaan.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa u rajeeyey in Eebe uu bogsiiyo dadkii ku dhaawacmay Qaraxii Zoobe ee yaalla isbitaalada Turkiga, wuxuuna u sheegay in mar walba Dowladda Soomaaliya ay ka warqabto xaaladooda.
Ugu dambeyntii Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa inta uu joogo magaalada Ankara, waxuu la kulmi doonaa Jaaliyada ku dhaqan dalkaas iyo Ardayda Soomaaliyeed ee halkaasi wax ka barata, isaga oo ka dalbanaya sidii ay u taageeri lahaayeen Dowladdooda.
Qaraxii Soobbe ma halkaas ayaa looga hari doonaa?